Munyori - The Word Foundation • Pamusoro peHarold Waldwin Percival
Sekutaura kwakaita Harold W. Percival muChinyorwa CheMunyori che Kufunga Nekupedzisira, akasarudza kuchengetedza hunyorwa hwake kumashure. Yaive nekuda kweizvi kuti iye aisada kunyora nhoroondo yehupenyu kana kuve nehupenyu hwakanyorerwa. Aida kuti zvinyorwa zvake zvimirire pakukodzera kwavo. Chinangwa chake chaive chekuti huchokwadi hwezvaakataura zvisakanganiswa nehunhu hwake, asi kuti zviongororwe zvichienderana nedanho rekuzviziva mukati meumwe muverengi. Zvakadaro, vanhu vanoda kuziva chimwe chinhu nezvemunyori wenyaya, kunyanya kana vachibatanidzwa nezvinyorwa zvake.
Nekudaro, mashoma mashoma nezve Mr. Percival anotaurwa pano, uye zvimwe zvakawanda zviripo mune yake Mashoko Okutanga Emunyori. Harold Waldwin Percival akaberekerwa muBridgetown, Barbados musi waApril 15, 1868, pamunda wevabereki vake. Aive wechitatu pavana vana, hapana mumwe wavo akararama. Vabereki vake, Elizabeth Ann Taylor naJames Percival vaive maKristu akazvipira; asi zvizhinji zveizvo zvaakanzwa semwana mudiki kwazvo zvaisaratidzika kunge zvine musoro, uye pakanga pasina mhinduro dzinogutsa kumibvunzo yake yakawanda. Akanzwa kuti panofanira kuve nevaya vaiziva, uye pazera diki kwazvo akatsunga kuti anowana "Vakachenjera" uye kudzidza kubva kwavari. Sezvo makore akapfuura, pfungwa yake ye "Vakachenjera" yakachinja, asi chinangwa chake chekuwana Kuzviziva kwakaramba kuripo.
Paaive nemakore gumi, baba vake vakafa uye amai vake vakatamira kuUnited States, vachigara muBoston, uye gare gare muNew York City. Akachengeta amai vake kweanenge makore gumi nematatu kusvika parufu rwake muna 1905. Percival akatanga kufarira Theosophy ndokubatana neTheosophical Society muna 1892. Sangano iri rakakamukana kuita mapoka mushure mekufa kwaWilliam Q. Mutongi muna 1896. Mr. Percival akazoronga Theosophical Society Independent, iyo yakasangana kuti iongorore zvinyorwa zvaMadame Blavatsky uye "magwaro" ekuMabvazuva.
Muna 1893, uye kaviri zvakare mukati memakore gumi nemana akatevera, Percival akazo "ziva Kuziva," Akataura kuti kukosha kwechiitiko ichocho ndechekuti chakamugonesa kuziva nezve chero chidzidzo nenyaya yepfungwa yaakadana. kufunga chaiko. Vakati, "Kuziva Consciousness kunozivisa 'kusazivikanwa' kune uyo anga achiziva zvakadaro."
Muna 1908, uye kwemakore akati wandei, Percival neshamwari dzinoverengeka vaiva uye vakashanda angangoita mazana mashanu maeka emichero, munda wepurazi, uye cannery angangoita mamaira makumi manomwe kuchamhembe kweNew York City. Pakatengeswa chivakwa Percival akachengeta angangoita makumi masere maeka. Yaive ipapo, padyo neHighland, NY, kwaakagara mukati memwedzi yezhizha uye akapa nguva yake kubasa rinoramba richienderera pazvinyorwa zvake.
Muna 1912 Percival akatanga kutsanangudza zvinyorwa zvebhuku kuva nehurongwa hwake hwekufunga. Nekuda kwekuti muviri wake waifanirwa kunge wakadzikama paanga achifunga, airaira chero rubatsiro rwaiwanikwa. Muna 1932 chirongwa chekutanga chakapedzwa uye chakadaidzwa Mutemo wekufunga. Haana kupa maonero kana kutora mhedziso. Asi, akataura izvo izvo zvaaiziva kuburikidza nekugadzikana, kufunga kwakanangana. Musoro wakashandurwa kuva Kufunga Nekupedzisira, uye bhuku iri rakazoprindwa muna 1946. Uye saka, iyi chiuru-peji rine chiuru rinopa ruzivo rwakakosha pamusoro pevanhu uye hukama hwedu nepasi nepashure rakagadzirwa mukati memakore makumi matatu nemana. Shure kwaizvozvo, muna 1951, akaburitsa Murume Nomukadzi uye Mwana uye, muna 1952, Masonry uye Zviratidzo Zvayo-Muchiedza cha Kufunga Nekupedzisira, uye Democracy Kuzvitonga.
Kubvira ku1904 kusvika ku1917, Percival yakabudisa magazini yemwedzi, Shoko, iyo yakaparadzirwa pasi rose. Vanyori vazhinji vane mukurumbira vezuva iri vakabatsira pazviri, uye nyaya dzese dzaive nenyaya yaPercival futi. Aya edhisheni akaiswa mune yega yega yemakumi mashanu neshanu nyaya uye akamupa nzvimbo mu Ndiani muAmerica. Izwi Foundation rakatanga kechipiri dzakateedzana The Word muna 1986 semagazini yekota inowanikwa kumitezo yayo.
VaPercival vakashaya nekuda kwezvisikwa musi waKurume 6, 1953 muNew York City. Mutumbi wake wakapiswa maererano nezvaaida. Izvo zvataurwa kuti hapana munhu aigona kusangana naPercival asina kunzwa kuti iye akasangana nemunhu anoshamisa zvechokwadi, uye simba rake uye chiremera zvaigona kunzwikwa. Kune huchenjeri hwake hwese, akaramba ari munyoro uye achizvininipisa, muchinda wekutendeseka kusingaori, shamwari inodziya uye inonzwira tsitsi. Aigara akagadzirira kubatsira kune chero anotsvaga, asi asingamboedze kumanikidza uzivi hwake kunaani zvake. Akanga ari muverengi anofarira pazvinhu zvakasiyana uye aive nezvakawanda zvaaishuvira, zvinosanganisira zviitiko zvazvino, zvematongerwo enyika, zvehupfumi, nhoroondo, kutora mifananidzo, kurima zvirimwa uye geology. Kunze kwetarenda rake rekunyora, Percival aive nehunyanzvi hwemasvomhu nemitauro, kunyanya echinyakare chiGreek nechiHebheru; asi zvakanzi aigara achidzivirirwa kuita chero chinhu asi izvo zvaaive ari pano kuti aite.
Harold W. Percival mumabhuku ake uye zvimwe zvinyorwa anoratidza mamiriro echokwadi, uye kugona, kwemunhu.